Kugeza & Kuchengetedza kweDaily Healthcare | KarmanHealthcare.com
musha / Bhati & Chengetedzo
Bhati & Kuchengetedzwa Aids
Bhati & chengetedzo zvishandiso zvakagadzirirwa kupa zera rega boka kugona kuita zviitiko zvezuva nezuva nekureruka zvishoma. Chikonzero chikuru chekutenga chimwe chezvinhu izvi ndechekudzivirira kukuvara kubva tsaona mukati mekugezera. Nekuwedzera kugadzikana uye maneuverability, iwe unokwanisa kufamba-famba muchimbuzi zviri nyore uye iwe unogona kuve nechivimbo chekuti urikudzivirira zvingangoitika kukuvara kuti zviitike. Pane zvakawanda zvakasiyana zvigadzirwa muchikamu ichi, kusanganisira shawidhi cheya, commode cheya, bhati chinja mabhodhi, anosimudza mabhati, uye zvimwe zvinobatsira michina kukukweretesa rubatsiro.
Zvakare, shawa commode macheya anogona kushandiswa seese ari commode uye yekugezera chair. Izvi zvinoreva kuti iwe unongoda chishandiso chimwe chete kuti ushande sechimbuzi uye bhati rekubatsira. Yakagadzirwa nekunyaradza uye kusimba mupfungwa, zvigaro izvi zvinogona kubatsira vashandisi pavanenge vachishandisa chimbuzi uye kana uchigeza. Iyo furemu inogadzirwa kubva kualuminium kana simbi, yega yega iine zvayakanakira nezvayakaipira. Aluminium yakareruka, asi simbi inogara yakasimba.
Muchengeti Shower Chair for Bath & Safety
Zvichienderana padanho rekufamba kwemunhu anoshandisa chigaro chekugezesa, vanogona kana vangasade muchengeti kugeza. Kana muchengeti achidikanwa, inogara iri pfungwa yakanaka kutarisa kuti sachigaro wekugezera anokwanisa here kugara muchengeti anopa rubatsiro. Izvi zvinoreva kuti chigaro chichava nemabatiro kana imwe nzira yekusimudza chinhu kubvumira muchengeti kuendesa murwere mukati nekubuda mubhavhu.
Naizvozvo, kana pasina muchengeti aripo, chigaro chekugezera chingangokwana kukubatsira kugeza. Bhati chairo & zvigadzirwa zvekuchengetedza zvinogona kuwedzera kukosha kwakawanda kumba kwako. Izvo zvakare zvakanaka kuve nechokwadi chekuti mamwe ekugezera & ekuchengetedza zvigadzirwa zviripo. Kuwana bata mubato semuenzaniso yakanaka kwazvo. Kune zvakare runyorwa rwezvigadzirwa zvekuchengetedza izvo zvakanaka kuve nazvo. Dzimwe dzadzo dzinotambanuka kubva mumba yekugezera. Iwe unogona kuwana mawiricheya ane makodhi uye akachengeteka mvura. Zvinonyatsoenderana nezvinodiwa.